Tartanka Hadda ee ku habboonaanta Wakhtiyadii Faafa kadib: Madasha IMEX
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Shirarka » Tartanka Hadda ee ku habboonaanta Wakhtiyadii Faafa kadib: Madasha IMEX
Wararka Ururada • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Education • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka Mareykanka
Xirfadlayaasha ururka, masiibada ma ahayn oo kaliya qas -wade laakiin waxay ahayd dardar -geliyaha isbeddelka meelaha sida maamulka, rajooyinka xubnaha, iyo farsamada.
Caqabadaha ururadu la kulmaan ayaa sii xoogaystay, taas oo ku khasabtay hoggaamiyayaasha ururrada inay si ka duwan u fekeraan oo xoojiyaan baahida isbeddel dhab ah.
Tallaabooyinka loo qaadayo isbeddelkan iyo tallaabooyinka loo baahan yahay si loogu kobco jawiga cusub ayaa ah diiradda Madasha Hoggaanka Ururka.
Maamulaha Kooxda IMEX wuxuu soo bandhigayaa munaasabad u heellan xirfadleyda ururrada oo ka dhici doonta IMEX America bisha Nofembar.
La qabtay Isniintii Nofeembar 8 oo qayb ka ah Smart Monday, oo ay ku shaqayso MPI, Madasha Hoggaanka Ururka, oo ay abuurtay ASAE: Xarunta Hoggaaminta Ururka, waa aqoon isweydaarsi galabnimo oo ay hoggaaminayaan guddi khubaro ah oo ay ka mid yihiin Harrison Coerver iyo Mary Byers, qorayaasha Jinsiyada ku habboonaanta.
Harrison Coerver, oo ah qoraaga Race for Relevance
Mary Byers, oo ah qoraaga Jinsiyada ku habboonaanta
Hab aan macno lahayn
Aqoon isweydaarsiga aadka u dhexgalka, oo cinwaan looga dhigay Tartanka Ku-habboonaanta Wakhtiyadii Musiibada Kadib, wuxuu sahamiyaa fikradaha laga soo bilaabo daabacaadda sannad-guurada 10aad ee buugga hagaha hoggaamiyeyaasha ururrada wuxuuna si geesinimo leh oo aan macno lahayn u eegayaa caqabadaha. Kalsoonidu waa mid ka mid ah arrimahan sida ay qoraa-qoraha Mary Byers sharraxayso: “Waxaan samaynay cilmi-baaris cusub oo ku saabsan dhisidda kalsoonida waxaanan ogaanay in guddi weyn ay ku adag tahay in si dhaqso ah loo dhiso kalsoonida. Kooxaha yaryar ayaa si fiican loogu meeleeyay inay go'aan gaaraan mana jiro 'loafing social'. ”
Ku biiritaanka Mary iyo Harrison waa guddi fulineed oo wadaagi doona waaya -aragnimadooda iyagoo abuuraya habab ula kac ah oo loo wajahayo maamulka; dib -u -fiirinta baaxadda barnaamijyada iyo adeegyadooda; iyo xoojinta qaadashada fikirka “digital first”. Kuwani waa: Moira H. Edwards, Madaxweynaha Shuraakada Ellipsis; Steve Smith, Maamulaha Xarunta Maamulka Ururka; iyo Len Toenjes, oo ah Madaxweynaha Qandaraaslayaasha Guud ee Associated ee Missouri.
Madasha Hoggaaminta Ururku waa marti-qaad keliya waxayna u furan tahay hoggaamiyeyaasha ururrada oo ay ku jiraan agaasimayaasha guud, COOs, madaxweynayaasha, agaasimayaasha fulinta, xoghayaha guud, kuraasta, iyo xubnaha guddiga. Waxay qayb ka tahay Smart Isniinta, maalin buuxda oo waxbarasho lacag la’aan ah oo dhacaysa maalinta IMEX America la furayo.
Bandhigga, oo loogu dabbaaldegayo daabacaaddiisa 10 -aad goobta cusub, Mandalay Bay, wuxuu isu keenayaa bulshada dhacdooyinka ganacsiga adduunka si loo qorsheeyo loona qoro wax walba laga bilaabo safarada dhiirrigelinta shirkadaha illaa dhacdooyinka macmiilka wakaaladda. Qorsheeyayaasha kulanka waxay la kulmi karaan alaab -qeybiyeyaasha caalamiga ah ee ku baahsan dhammaan qaybaha warshadaha. Kuwaas waxaa ka mid ah meelaha Yurub tagaan Austria, Belgium, Czech Republic, Croatia, France, Germany, Greece, Italy, Ireland, Malta, Netherlands, Portugal, Spain, Switzerland, Scandinavia iyo UK. Australia, Kuuriya, Japan, New Zealand iyo Singapore ayaa ka mid ah dalalka Aasiya-Baasifigga la xaqiijiyay oo ay weheliyaan Kenya, Morocco, Rwanda, South Africa oo ka socda Afrika. Laga soo bilaabo Atlanta iyo Calgary ilaa LA iyo Vancouver, soo -bandhigayaasha Mareykanka iyo Kanadiyaanka ayaa dhaqan galay. Waxay ku biiraan dalal badan oo Latin America ah oo ay ku jiraan Argentina, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Mexico iyo qaar kaloo badan.
IMEX Ameerika Daabacaadda 10aad waxay ka dhici doontaa Noofembar 9 - 11 Mandalay Bay ee Las Vegas iyadoo leh Smart Isniinta, oo ay ku shaqeyneyso MPI, Nofeembar 8. Si aad isaga diiwaangeliso - bilaash - guji halkan. Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan fursadaha hoyga iyo si aad u ballansato, guji halkan.
Caafimaadka & Badbaadada: Kooxda IMEX waxay si dhow ula shaqeyneysaa Mandalay Bay iyo la -hawlgalayaasha kale ee Las Vegas si ay u soo bandhigaan bandhig ka soo baxa shuruudaha caafimaad iyo badbaado ee ugu dambeeyay oo bulshada siiya waayo -aragnimo badbaado leh, raaxo leh laakiin aan madhalays ahayn.